भोको पेट भर्ने युवाहरु
विराटनगर । कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी जारी निषेधाज्ञा अवधिमा पछिल्लो समय भोको पेट भर्नेहरु युवाहरुको समुह सक्रिय बन्दै गएको छ ।
निषेधाज्ञा प्रभावित गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकहरुको भोको पेट भर्न विराटनगर–५ का युवाको समुह सक्रिय बन्दै गएको हो । वडा नं. ५ स्थित पृथ्वी चौकका युवाहरुको समुहले पछिल्लो १७ दिनयता निःशूल्क खाना खुवाउने अभियान चलाउँदै आएका छन् । ‘अभियान साथी तपाईको’ अभियानका १५ जना युवाहरुको समुहले निषेधाज्ञा प्रभावित, गरिब तथा विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र सडकपेटीमा बस्ने नागरिकलाई निःशुल्क खाना वितरण गर्दै आएका हुन् ।
जेठ १० गतेदेखि सुरु भएको अभियानको आज १७ औं दिन युवाहरुको समुहले १ सय ९८ जनालाई निःशूल्क भोजन वितरण गरेका छन् । महामारी नियन्त्रण र त्यसको प्रभाव मुल्यांकनमा सरकारको भुमिका नगन्य बन्दा युवाहरुको समुहले कार्यभार सम्हालेको अभियानका संयोजक सुरेन शाक्यले बताए । ‘निषेधाज्ञा भएपनि सरकारले यसपटक राहत वितरण गरेन । धेरै नागरिकले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । हामीले आ–आफ्नो घरछेउमै त्यस्ता व्यक्तिहरु फेला पार्‍यौं,’ उनले भने, ‘अन्त्यमा त्यो अवस्था देख्न नसकेर यो अभियानको थालनी गरेका हौं ।’
मोरङमा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै धेरैको रोजगारी गुमेपछि दुईछाक टार्न समेत गाह्रो भएपछि युवाहरुको समुहले खाना खुवाउने अभियानको थालनी गरेका थिए । हाल उनीहरुले वडा नं. ५ स्थित पुरानो मेट्रो गार्डेन भएको भवनमा खाना पकाएर बिहानै १० बजे विराटनगरको कुनाकुनामा पुगि भोको पेट भर्दैछन् । आफ्नै समुहका साथीहरुको आर्थिक सहयोगमा सुरु गरिएको अभियानलाई हाल बाह्य सहयोग पनि प्राप्त भईरहेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘सुरुमा हामीहरुले व्यक्तिगत क्षमताले भ्याएसम्म अभियान चलायौं । पछि बाह्य दाताहरुको पनिन सहयोग आउन थाल्यो,’ अभियानका सदस्य अनिल खडकाले भने, ‘कसैले आर्थिक रुपमा भने कसैले खाद्यान्न सहयोग गर्न थाल्नुभयो ।’
विराटनगर–५ का लुईस शाक्य, वेद शंकर राउत, कल्याण कटवाल, विनोद मलाह, हरिकण मण्डल र मनोज मलाह लगायतका युवाहरु अभियानका सक्रिय सदस्यहरु हुन । निषेधाज्ञा अवधिभर अभियानलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने बिषयमा उनीहरु प्रतिबद्ध छन् ।
बिहिबार, २७ जेठ, २०७८, साँझको ०६:०२ बजे